Ingabe uyazi ukuthi umehluko oyinhloko cuisine Russian evela e-US? EMelika, angikuboni isobho. Lapho izwe libuswa ukudla okusheshayo, ukuba izitsha yokuqala akuzona nje obusolisayo: bona awakulungele lokhu. Phakathi naleso sikhathi, ososayensi kanye izazi zokudla emhlabeni wonke baye eside bafinyelela esiphethweni ukuthi iningi abanikazi izibalo ukwenzela ukungena okuncane kakhulu okungenani kanye ngosuku ukudla isobho. Uma lolu lwazi uqhathaniswa yokuthi abantu ukhuluphele kakhulu ukuphila nje e-United States, ungaqiniseka ngokunemba we lo mbono.
Ngaphandle Yiqiniso isobho, asifuni ukufa. Kodwa iqiniso liwukuthi somzimba wethu ingamanzi ukuze bavuselele izitsha yokuqala (ikakhulukazi isobho noma Meatless), uchitha kilojoule okuningi kunabo ziqukethe. Yingakho ukudla kuqala nawe ungadla izikhathi eziningana ngosuku, kungakhathaliseki isikhathi sosuku.
isobho Lenten of udali, uphizi oluhlaza, iklabishi, anyanisi, nezinye imifino noma izithelo ngeke sikukhokhise umzimba amandla, kodwa musa cisha okhalweni noma okhalweni.
Ngakho ake ukudla ngendlela efanele, ukupheka Meatless amasobho, ekubeni slimmer.
Ukupheka Meatless isobho amalentili, udinga:
· A ingilazi nesitshulu. Kungaba lowehlukile, Ngithanda ebomvu elikhulu
· Onion elikhulu
· 2 izaqathe ezinkulu
· Paprika fresh futhi izando
· Mint noma Thyme. Abakwazi kuthathelwe indawo yimuphi omunye imifino
Vele wenze ukubhuka. Umngane wami kule isobho nesitshulu kuyinto Meatless ubeka amazambane. Enginakho inhlanganisela efanayo amazambane nodali ungathandi, ngakho angizange engeza imifino impande. I wageza nesitshulu ihora engeza amanzi. Kuze kube siyakhukhumala epanini ukuthosa ethosiwe yashizi kwi indawo grater izaqathe, anyanisi kanye pepper, sibe yimichilo.
udali evuvukele ukupheka (ngokuvamile ukupheka isikhathi kuboniswe ku iphakethe). Ngaphambi nje kokuba ama ukuzimisela ukuze ungeze ngomumo zazharku, pepper, paprika, garlic olwembiza.
Fafaza Mint oqoshiwe Thyme, amboze ngesivalo, ukuvumela sokunika. I isobho edliwayo ngakho njengoba ungakwazi ngaphambi kokukhonza engeza isipuni esigcwele ukhilimu omuncu noma ukhilimu. Ubani, njengoba uthanda.
Emkhayeni wami ngiyawuthanda kakhulu Meatless isobho. I apheke kubo kusukela imidumba nemifino. Ngezinye izikhathi mina engeza ukhilimu omuncu noma ukhilimu, kodwa ongenalo ngempela: obukhulu yemifino isobho simnandi futhi eqotho, ngisho ngaphandle ukhilimu.
Ukuze uhlale ukuma, ngincoma okungenani kanye ngesonto ukudla Meatless isobho ezenziwe kusukela broccoli, zucchini kanye isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi. Abaningi bakholelwa ukuthi kuyinto kunganambitheki. Kodwa mhlawumbe bamane angazi kanjani ukupheka?
Isobho puree imifino eluhlaza, sidinga:
· Isiqu isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi
· Zucchini noma courgette
· Bank of uphizi oluhlaza
· Izinongo, usawoti
Kuze kube amazambane kuphekwe epanini ukuthosa Fry zucchini, pepper, pripuskayut isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi. Lapho ukuthambisa, kuba khona ukubekelwa eceleni.
Ngo Sekukancane nesobho lamazambane Beka kuphekeke imifino, broccoli futhi uphizi, kanye marinade. Ibila ukunikeza akukho kuka imizuzu 5. Kancane ostuzhennoy isobho blendiruem, engeza eziningi izinongo kanye namakhambi. Uma isobho mncane kakhulu, ungakwazi ukwengeza ufulawa kancane futhi ethosiwe kuya ngamathumba futhi. Isobho ehlotshiswe zasemazweni, nakho idinga ukuba okuningi.
amasobho Meatless athandwa kakhulu phakathi abagcina ukudla. abantu ababhekene nesimo esinje kungabaduduza belulekwa ukulungiselela ukukhanya ipea isobho, engeke zehluke ipea isobho nge inyama ngabhema.
Okokuqala, ukupheka peas. Angikaze cwilisa. Mane ugcwalise "umunwe" amanzi ice, futhi ngokushesha lapho amathumba, engeza ku-pan ku ice olwembiza. Izikhathi ezimbalwa. Ngokuvamile 40 imizuzu uphizi abilisiwe puree esithambile. Vele ngalesi sikhathi mina kukho izaqathe ogayiwe kanye amazambane oqoshiwe. Ngininika ngamathumba baze okuphekwe. Izaqathe kanye anyanisi, ungakwazi Fry futhi kungenziwa efakwa eluhlaza isobho. isobho Ready ezihlangene, futhi akunika ngamathumba, bese wengeza amaconsi ambalwa intuthu ketshezi .... Lokhu isobho Meatless kunothile zasemazweni nama-crackers, ukunambitheka ukudla okufana kakhulu isobho izimbambo ngabhema.
Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka ka Coca-Cola